Jahwareerka ku yimid otomaatiga suuq geynta | Martech Zone
Jaahwareeriyaha Qalabaynta Suuqgeynta
Isniin, Maarso 10, 2014 Isniin, Maarso 10, 2014 Douglas Karr
Markii aan dhawaan wax ka qoray tagtay, hadda iyo mustaqbalka suuqgeynta, hal meel oo diiradda la saaray ayaa ahayd otomaatiga suuq geynta. Waxaan ka hadlay sida ay runtii warshadaha u kala jabeen.
Waxaa jira xalal hooseeya oo kaaga baahan inaad iswaafajiso hawlahooda si aad ugu guuleysato. Kuwani maaha kuwo raqiis ah costs kharash badan ayaa kumanaan doolar ah bishii waxayna asal ahaan kaaga baahan yihiin inaad dib u eegto sida shirkaddaadu u shaqeyso si ay ula jaan qaado hababkooda. Waxaan aaminsanahay inay tani masiibo u tahay shirkado badan… kuwaas oo ku guuleysta sababta oo ah nidaamka ayaga lahaa shaqeeyay si kafiican.
Xalalka-dhamaadka-sare waxay bixiyaan tan oo dabacsanaan iyo u-habeyn ah, laakiin hirgelinta ayaa ah mid naxariis darro ah. Mararka qaarkood, waxay u baahan tahay bilo shaqo ah iyo xitaa barnaamijyo gaar ah iyo ilo maamul. Waxaan la shaqeynaa dhowr shirkadood oo rukhsad siisay suuq-geynta suuqa xalalka, laakiin wali si buuxda looma hirgelin oo looga faa'iideysan tikniyoolajiyadda. Marka… waxay bixinayaan kharashaad aad u tiro badan, laakiin waligood ma ogaanayaan suurtagalnimada.
Xaqiiqda Isdhexgalka ayaa carqaladeynaysa suuqa (markale). Xuquuqda Isdhexgalka ayaa horey loogu magacaabay isbeddel dejinta shirkadda otomaatiga suuq geynta by Gleanster - oo leh hirgelinta ugu dhakhsaha badan iyo is-dhexgalyada ugu fudud. Hada waxay badalayaan qaabka ay shirkadaha u qaadan karaan xeeladaha suuq geynta nolosha.
Xaqiiqda Isdhexgalka hadda waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay soo galaan suuqa otomaatiga suuqgeynta heer kasta oo ay ku xeel dheer yihiin. Haddii aysan lahayn istiraatiijiyad, waxay ku bilaabi karaan a aasaasiga ah xirmo. Haddii ay barteen suuqgeynta iimaylka oo ay diyaar u yihiin kicinta iyo suuqgeynta suuqgeynta, way dhaqaaqi karaan ama ku bilaabi karaan qalabaynta. Oo hadday diyaar u yihiin inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​barxadda, way dhaqaaqi karaan ama ku bilaabi karaan meertada nolosha suuq geynta
Halkan waxaa ah burburintii Xaqiiqda Isdhexgalka xirmo:
aasaasiga ah - Email, Bogga Soo Degitaanka iyo Foomka Qalabka, Ka Warbixinta Emailka iyo Raadinta, Qeybaha Dhismaha, Falanqaynta Websaydhka, Warbixinta booqdaha aan la aqoon, Warbixinta martida la aqoonsaday iyo Warbixinta Hogaanka kulul.
qalabaynta - Marka lagu daro aasaasiga ah, ku dar Falanqaynta Bulshada iyo Warbixinta, Barnaamijyada Suuqgeynta otomaatiga ah, Warbixinta Barnaamijyada Suuqgeynta, Muuqashada CRM iyo Maareeyaha Guusha Macaamiil Gaarka ah.
Lifecycle - Marka lagu daro dhammaan astaamaha aasaasiga ah iyo otomatiga, Suuq-geynta Nolosha, Diyaarinta Nolosha iyo Shuruudaha Albaabka, iyo 3D Dhibcaha.
Waxa ugufiican dhamaan, baakadka aasaasiga ah ayaa aad uga qaalisan iibiyaasha hal muuqaalka leh ee warshadaha. Looma baahna in laga guuro hal iibiye oo loo wareego mid kale - iyadoo laga tegayo sirdoonka macaamiisha waxqabadka leh. Iyada oo Xuquuqda Isdhexgalka dhammaan xogta horeyba u jirtay, waxay kaliya awood u siinayaan astaamo badan markaad u gudubto xirmada xigta.
Waa kuwan muuqaalka guud sida Xaqiiqda Isdhexgalka kala duwan
Daah-: Xaqiiqda Isdhexgalka waa kafaala qaaday Martech Zone, Iyagu waa macaamiisha Highbridge (waxaan soo saarnay fiidiyowga), waxaanan nahay macaamiishooda!
Tags: 3d goolalCRMsuuq geynta nolosha macaamiishaEmail Marketingwarbixinta emaylkaemail raadinqalabka foomkafoomamkaraadad kululpage degteySuuq geynta noloshasocodsiinta noloshasaxda ah is-dhexgalkaROIiibingabalqaybintafalanqaynta bulshadaka warbixinta booqdahaAnalytics web
Waa maxay SEO dabiici ah?
Weligood tan kuma barin Fasalka Suuqgeynta